डा. गोविन्द केसीको माग हुबहु हुन नसक्नेः प्रचण्ड – Halkaro
डा. गोविन्द केसीको माग हुबहु हुन नसक्नेः प्रचण्ड
प्रकाशित मिति : २०७५, २८ असार बिहीबार July 14, 2018
चितवन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल“चण्ड”ले डा. गोविन्द केसीको माग हुबहु कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कसैले भनेकै भरमा सबै माग सम्बोधन हुन नसक्ने बताउनुभयो।
उहाँले सार्बभौम अधिकार सम्पन्न संसद भन्दा माथि कोही पनि नहुने भन्दै कुनै व्यक्तिले यो या त्यो गर भनेर निर्देशित गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । प्रतिवेदन माथि थपघट गर्ने अधिकार सरकारलाई भएको भन्दै प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षा विधयकबारे अन्तिम फैसला संसदले गर्ने बताउनुभयो।
डा. केसीलाई काठमाडांै ल्याएर उपचार गर्न र वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । फुजेल घटनाका सम्बन्धमा पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा बोल्दै प्रचण्डले छविलाल पौडलले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै समस्या समाधानका लागि सकरात्मक वातावरण बनाएको बताउनुभयो । छविलाल पौडेल समझदारी र जिम्मेवारीका साथ कारागारमा बसेको प्रचण्डको भनाइ छ।
प्रचण्डले फुजेल घटना बारे आफूले अरु धेरै प्रतिक्रिया दिन नचाहेको बताउनुभयो । अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष प्रचण्डले कुनै एक प्रदेशको राजधानी अर्को जिल्लामा सारे चारैतिर राजधानी सार्ने हल्ला चल्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको भन्दै प्रदेशको दुई तिहाइले जहाँ भन्छ त्यहाँ राजधानी हुने प्रचण्डको जीकिर छ।
← विकासमा पारदर्शीता बढाउन मिडियाको भुमीका महत्वपूर्ण
बुधबार साझँ बाघको आक्रमणबाट एकजना घाइते: श्रेष्ठ भन्छन् एक्कासी बाघले झम्टिएपछि बाघसग मुक्का हानाहान →